color and composition (color) - Random of NangNyi
Home Unlabelled color and composition (color)
by NangNyi 12:26 PM
ဘားကန့်ရန်ကုန် ၂​၀​၁​၁ ရဲ့​​ဒု​တိ​ယေ​န့​​မှာ အချိန်တစ်ချိန်ယူြ​ပီးေ​ခါ​င်း​စဉ်အေြ​ကာ​င်း​အရာ တစ်ခု​ကိုေ​ဆွး​နွေး​ခဲ့ေ​သး​တ​ယ်ြေ​ပာေ​တာ့ေ​တာ်ေ​တ်ာများများ​က အဲ့​ဒိ​အေြ​ကာ​င်းေ​တွ စာြ​ပ​န်ေ​ရး​ပါ​လို့​ တိုက်တွ​န်းြ​က​လို့​ ဒီ​ပို့​စ်ကိုေ​ရးြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ်.. တ​ကယ်တ​မ်း​က မနှစ်တု​န်း​က ဘား​က​န့်​ ၂​၀​၁​၀ မှာြေ​ပာ​ခဲ့​တဲ့ အေြ​ကာ​င်း​အရာေ​တွ​ကို​သာေ​ရး​ရ​င် ပိုြ​ပီး​အစီ​အစဉ်တကျြ​ဖစ်မှာ အေ​သ​အချာ​ပဲ.. ဒါေ​ပ​မ​ယ့် မနှစ်တု​န်း​က​လ​ည်း စာြ​ပန်မေ​ရးြ​ဖစ်ခဲ့​ဘူး.. ဒီနှစ်ကျြ​ပ​န်ေ​တာ့ Hostingြ​ကီး​ပျော​က်ေ​န​တဲ့ nangnyi.net ကေ​လး​ကိုြ​ပ​န်ြ​ပီး​အသက်သွ​င်း​တဲ့​အေ​န​နဲ့​ ပ​န်းချီ​အေြ​ကာ​င်း​ပို့​​စ်ေ​လး​ကို အားခဲေ​ရး​လိုက်တာ..
တ​ကယ်က ဘား​က​န့်​​မှာ ဒီနှ​စ် တစ်ခု​ခု ဝ​င်ြေ​ပာ​ဖို့​ အစီ​အစဉ်မ​ရှိ.. မနှစ်က​ဆိုေ​သေ​သချာချာ ပါ​ဝါ​ပွို​င့်ေ​တွ​ဘာေ​တွြ​ပင်ဆင်ထားေ​ပ​မ​ယ့် ဒီနှ​စ် ပိုြ​ပီး​တာ​ဝ​န်ြ​ကီး အလုပ်များေ​န​လို့​ ကိုယ်တိုင်အ​ခ​န်း​တစ်ခ​န်း​ယူေ​ဆွး​နွေြး​ဖစ်ဖို့ြ​ကိုေ​တွး​မ​ထား​ပါ.. သို့ေ​သာ်​လ​ည်းေ​ပါ့ေ​လ.. ဒု​တိ​ယေ​န့​​ရဲ့​ မ​နက်ပို​င်း​မှာေ​ဆွး​နွေး​မယ်ဆိုြ​ပီး စာ​ရွ​က်ေ​တွ​ကပ်ထားြ​ပီး​ကာ​မှ အချိ​န်ေ​တွြ​ပ​န်ေ​ရွှ့​​တာ​တို့​​ဘာ​တို့​ တချို့​​က​လု​ပ်ေ​တာ့ မ​နက်ပို​င်း​အခ​န်းေ​တွ​လွ​တ်ေ​န​တာေ​ပါ့.. ဒါ​နဲ့​ အဆ​င်ြေ​ပ​တဲ့ေ​အာ်​ဂနိုက်ဇာေ​တွ​ပဲ တာ​ဝန်ယူြ​ပီး ဝ​င်ေ​ပး​ပါ​ဆို​တာ​နဲ့​ က​တိုက်က​ရို​က် ဝ​င်ြေ​ပာ​လိုက်ရ​တာ.. ဘာ​ပါ​ဝါ​ပွို​င့် ဘာ​ကွန်ပျူ​တာ​မှ​လ​ည်း မ​ရှိ.. Color Wheelြ​ကီး​တစ်ခု​ပဲြ​ပ​ထားြ​ပီး ဗ​လို​င်းြ​ကီးေ​တွ ရွှီး​ပစ်လိုက်တာ​ပါ​ပဲ.. (ေ​တ်ာချ​က်ေ​တွ).. ဒါေ​ပ​မ​ယ့် ခုေ​တာ့ စာြ​ပ​န်ေ​ရး​တာ​ဆိုေ​တာ့ လက်ဟ​န်ြေ​ခ​ဟ​န်ေ​တွ​နဲ့​​လ​ည်းြ​ပ​မ​ရ​ဘူး​ဆိုေ​တာ့ တချို့​​န​မူ​နာ​ပုံေ​လးေ​တွ​ဘာေ​တွ ထ​ည့်ေ​ပး​ထား​ပါ​တ​ယ်..
ဒါ​ဟာ အေြ​ခ​ခံ​အေ​ရာင်စက်ဝို​င်းြ​ကီး​ပါ.. ကွန်ပျူ​တာေ​မာ်​နီ​တာေ​တွ​နဲ့​ ဝဘ်ဆို​က်ေ​တွေ​ပါ်​မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ RGB စ​နစ်ရ​ယ်.. ပုံနှိပ်လုပ်င​န်းေ​တွ​မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ CMYK စ​နစ်ရ​ယ်..ေ​နာ​က်ြ​ပီး စာ​ရွ​က်ေ​တွ က​င်း​ဗတ်စ်ေ​တွေ​ပါ်​မှာေ​ရး​ဆွဲ​အလုပ်လုပ်တဲ့ ပ​န်းချီ​ဒီ​ဇို​င်း​သမားေ​တွ​ရ​ယ် အကုန်လုံး​အတွ​က် အေြ​ခ​ခံ​အကျ​ဆုံး​အေ​ရာင်စက်ဝို​င်း​ပါ.. သူ့​​သေ​ဘာ​တရား​ကိုြေ​ပာြ​ပ​ရ​မယ်ဆို​ရ​င်..
အေ​ရာ​င်ေ​တွ​အား​လုံး​ဟာ ဝါ နီြ​ပာ ဆို​တဲ့ ၃ေ​ရာင်ကို အေြ​ခ​ခံ​ပါ​တ​ယ်.. သူ​တို့​​ကို မူ​လေ​ရာ​င် (Primary Color)လို့ေ​ခါ်​ပါ​တ​ယ်.. သူ​တို့​ ၃ေ​ရာ​င်ြ​ဖစ်လာ​ဖို့​ ဘယ်ဟာ​နဲ့​ ဘယ်ဟာ​ကို​မှေ​ရာ​စပ်လို့​​မ​ရ​ဘဲ အဝါ အနီ အြ​ပာ​ရယ်လို့​ သီး​သန့်ေ​ပါ်​ထွ​က်ြ​ဖစ်တည်လာ​တာ​မို့​ သူ​တို့​​ဟာ မူ​လေ​ရာ​င်ေ​တွြ​ဖ​စ်ြ​က​ပါ​တ​ယ်.. သူ​တို့​​ကိုေ​ခါ်​တဲ့​အခါ​မှာ​လ​ည်း အစဉ်လိုက်ပဲေ​ခါ်ြ​ကေ​လ့​ရှိ​ပါ​တ​ယ်..ြ​ပာ ဝါ နီ​တို့​​ဘာ​တို့​ မေ​ခါ်​ပါ​ဘူး.. ဘာ​လို့​​လဲဆိုေ​တာ့ြ​ပ​င်း​အား​အစဉ်လိုက်အ​တို​င်း စီ​ထား​တာ​မို့​​လို့​​ပါ..ြ​ပ​င်း​အား​ကို တ​ကယ်သိချင်ရ​င် စ​မ်း​လို့​​ရ​တ​ယ်.. အဲ့​ဒိ အေ​ရာင်စက်ဝို​င်းြ​ကီး​ကို ပ​ရ​င့်​တာ​မှာ အြ​ဖူ​အမဲ​နဲ့​ ထု​တ်ြ​က​ည့်​ပါ​လား.. မီးခိုးေ​ရာ​င်ေ​တွ​နဲ့​​ပဲ ထွက်လာ​တဲ့​အခါ အဝါ​ဟာ အဖျော့​ဆုံးြ​ပီး​မှ အနီ .. အြ​ပာ​ဟာ အရ​င့်​ဆုံး​အေ​န​နဲ့​ ထွက်လာ​မှာ​ပါ..
အိုေ​ခ.. မူ​လေ​ရာ​င်ေ​တွ​ကို ရြ​ပီ.. ဒါ​ဆို မူ​လေ​ရာ​င် ၃ ခု​ကို ၂ ခု​စီေ​ရာ​စ​ပ်ြ​က​ည့်​လိုက်ရ​င်.. ဒုတိယ​အေ​ရာ​င် (Secondary Color)ေ​တွ ရ​လာ​မ​ယ်.. ပုံ​မှာြ​ပ​ထား​တဲ့​အတို​င်း​ပါ​ပဲ.. အဝါ​နဲ့​​အနီေ​ပါ​င်းေ​တာ့ လိေ​မ္မာ်.. အနီ​နဲ့​​အြ​ပာေ​ပါ​င်းေ​တာ့ မ​ရ​မ်း.. အြ​ပာ​နဲ့​ အဝါ​ဆို​ရ​င် အစိ​မ်ြး​ဖစ်ပါ​တ​ယ်.. အဲ့​ဒိ ဒု​တိ​ယေ​ရာ​င်ေ​တွ​ကို အနီး​ကပ်ရှိ​တဲ့ ပ​ထ​မေ​ရာ​င်ေ​တွ​နဲ့​ ထပ်ထ​ပ်ြ​ပီးေ​ပါ​င်း​သွား​တဲ့​အခါ တ​တိ​ယေ​ရာ​င် (Thirdary Color)ေ​တွ​ထပ်ထွက်လာ​ပါ​တ​ယ်..
ဒါေ​လာက်ဆို အေ​ရာင်စက်ဝို​င်းြ​ကီး​ကို အေြ​ခ​ခံ​အားြ​ဖ​င့် နား​လည်သွားြ​ပီ.. အိုေ​ခ ဒါ​ဆို​ရ​င် ဆ​န့်​ကျင်ဘက်အေ​ရာ​င်ေ​တွ (contrast color) နဲ့​ လိုက်ဖက်အေ​ရာ​င်ေ​တွ (hermony color) ကို ဆ​က်ြေ​ပာ​မ​ယ်.. အေ​ရာ​င်ေ​တွ​မှာ တွဲ​ဖက်လို့​ လို​က်လျော​ညီေ​ထွ​အဆ​င်ြေ​ပ​တာ​ကို လိုက်ဖ​က်ေ​ရာင်လို့ေ​ခါ်ြ​က​တ​ယ်.. ဥပမာ အဝါ​နဲ့​​အစိ​မ်း.. အြ​ပာ​နဲ့​​မ​ရ​မ်း စ​သြ​ဖ​င့်ေ​ပါ့.. အေ​ရာင်စက်ဝို​င်းြ​ကီး​ကိုြ​က​ည့်​လိုက်မယ်ဆို​ရ​င် အနီး​က​ပ်ေ​န​တဲ့ အေ​ရာ​င်ေ​တွ​ကို လိုက်ဖက်တယ်လို့​ သတ်မှ​တ်ြ​က​ပါ​တ​ယ်.. အဝတ်အ​စား​ဝတ်ရင်လ​ည်း ပ​န်းေ​ရာ​င်ေ​လး​န့ဲ ခ​ရ​မ်း​တို့​.. အြ​ပာ​ရ​င့်​နဲ့​ မ​ရ​မ်းနုေ​လး​တို့​ တချို့​​ဝ​တ်ေ​လ့​ရှိ​တ​ယ်ေ​လ.. ဆ​န့်​ကျင်ဘက်အေ​ရာင်ဆို​တာ​ကေ​တာ့ ရှ​င်း​ပါ​တ​ယ်.. အေ​ရာင်တ​စ်ေ​ရာင်ရဲ့​ မျ​က်နှာချ​င်း​ဆိုင်တ​ည့်​တ​ည့်​က အေ​ရာင်ဟာ သူ့​ ဆ​န့်​ကျင်ဘက်အေ​ရာင်ပါ​ပဲ.. ဥပမာ အဝါ​နဲ့​ ခ​ရ​မ်းေ​ရာ​င်.. အနီ​နဲ့​ အစိ​မ်း စ​သြ​ဖ​င့်ေ​ပါ့.. အေ​ရာင်စက်ဝို​င်းြ​ကီး​ထဲ​မှာ စိတ်မှ​န်း​န့ဲ မျ​က်နှာချ​င်း​ဆိုင်မျ​ဥ်းေ​တွ ဆွဲြ​က​ည့်​လို​က်ြ​ကေ​ပါ့..
ေ​နာ​က်ြ​ပီး ဒီ​စက်ဝို​င်းြ​ကီး​ကို သိ​ထားြ​ခ​င်ြး​ဖ​င့် အသုံး​တ​ည့်​တာေ​နာက်တစ်ခု​က အပူေ​ရာ​င် အေ​အးေ​ရာ​င်.. အလ​င်းေ​ရာ​င် အေ​မှာ​င်ေ​ရာ​င်ေ​တွ​ပါ.. အဝါ​နဲ့​ မ​ရ​မ်း​ကို က​န့်​​လ​န့်ြ​ဖတ်မျ​ဥ်း​ဆွဲ​လို​က်ြ​ပီး​ထား​ရ​င် ဟို​ဘက်က အစိ​မ်းေ​တွ အြ​ပာေ​တွ ပါ​တဲ့​အြ​ခ​မ်း​က အေ​ရာ​င်ေ​တွ​က အေ​အးေ​ရာ​င်.. ဒီ​ဘက်က အနီေ​တွ လိေ​မ္မာ်ေ​တွ​ပါ​တာ​က အပူေ​ရာင်လို့​ သတ်မှတ်တ​ယ်.. ဒါ​က တစ်ခု..ေ​နာ​က်ြ​ပီး အနီ​နဲ့​ အစိ​မ်း​ကိုြ​ဖ​တ်ြ​ပီး​ဆွဲ​ထားြ​ပီး​ရ​င်ေ​အာက်က အြ​ပာ​ဘ​က်ြ​ခ​မ်း​က အေ​ရာ​င်ေ​တွ​က အေ​မှာ​င်ေ​ရာ​င်ေ​တွ.. အေ​ပါ်​က အဝါြ​ခ​မ်း​က အလ​င်းေ​ရာ​င်ေ​တွ.. အလ​င်း​နဲ့​​အေ​မှာ​င်ေ​ရာင်တွဲ​သုံး​တာ.. အပူ​နဲ့​ အေ​အး​တွဲ​သုံး​တာ​ဟာြ​က​ည့်​သူမျက်စိ​ကို ဒို​င်း​က​နဲ ဝု​န်း​က​နဲြ​မင်သာေ​စ​တဲ့​အတွ​က် ဆွဲေ​ဆာင်အား​သိ​ပ်ြ​ပ​င်း​ပါ​တ​ယ်.. ဥပမာ အဝါ​နဲ့​​မ​ရ​မ်း တွဲ​ဝတ်ထား​တဲ့ မိ​န်း​ကေ​လး​တ​စ်ေ​ယာက်ဟာ အြ​ပာ​ဖျော့​ဖျော့​နဲ့​​အြ​ဖူ​တွဲ​ဝတ်ထား​တဲ့ မိ​န်း​ကေ​လး​တ​စ်ေ​ယာက်ထ​က်ေ​တာ့ သိသာေ​ပါ်​လွ​င်ေ​န​မှာ​ပါ..
အေ​ရာ​င်ေ​တွ​အေြ​ကာ​င်း​ကေ​တာ့ အေြ​ခ​ခံ​အေ​ရာင်စက်ဝို​င်း​ကို​သိ​ရုံ​ဆိုေ​တာ့ ဒီေ​လာက်ပဲြေ​ပာြ​ပေ​တာ့​မ​ယ်.. Composition လို့ေ​ခါ်​တဲ့ေ​န​ရာ​ထား​သိုြ​ခ​င်း​အေြ​ကာ​င်း​ကိုေ​တာ့ ဆ​က်ေ​ရး​ပါ​ဦး​မ​ယ်..
(မြ​ကာ​မီ လာ​မ​ည်.. မြှော်..ေ​ပါ့ေ​နာ်)
peace.. to all !!
color and composition (color) Reviewed by NangNyi on 12:26 PM Rating: 5
ရွှေပြည်သူ June 06, 2011 1:45 PM
အရောင်တွေရဲ့ သဘောတရားကို သိပ်စိတ်ဝင်စားပေမယ့် သေချာမလေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အခုလို ဖတ်ရတော့ ဗဟုသုတ သိပ်ရပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီမလေး...